एमिरेट्स बाट यात्रा, उडान एमिरेट्स | यात्रा समाचार
एमिरेट्स बाट यात्रा, एमिरेट्स
मारिएला क्यारिल | | उड्डयन, सुझावहरू
संसारको सबैभन्दा प्रतिष्ठित एयरलाइन्स मध्ये एक हो एमिरेट्स र जोसँग अहिलेसम्म यसबाट यात्रा गर्ने अवसर भएको छैन पक्कै यो चाहिन्छ। कुनै श doubt्का बिना एयरलाइन्सको विशाल र विविध ब्रह्माण्डमा यो अरब एयरलाइन्स पहिलो बीच हो.
मैले times पटक यात्रा गर्ने अवसर पाएको छु र ती दुई मध्ये मैले विस्तृत विश्व पार गर्यो किनकि म दक्षिण अमेरिकाबाट टोकियो गएँ, त्यसैले धेरै घण्टाको उडानमा म तयार हुन सकेको छु। राय यस कम्पनी र सेवाको बारेमा यसले बढावा दिन्छ र प्रस्ताव गर्दछ। यहाँ तपाईंसँग यो छ, हुनसक्छ तपाईंले यसलाई साझा गर्नुभयो वा नहुन सक्नुहुन्छ।
2 अमीरेट्स इकोनोमी क्लास
3 अमीरात बिजनेस क्लास
अमीरात ईतिहास को एक केहि गरीरहेको छ संयुक्त अरब एमिरेट्स को झण्डा वाहक हो र मध्य पूर्वमा सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन। यसको हब विलासी र प्रभावशाली दुबई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो।
एमिरेट्स पाँच महाद्वीपमा cities 74 शहरहरूमा उड्छ र यो अनुमान गरिएको छ कि यसको झन्डै 3500, XNUMX,०० उडानहरू यस ग्रहको आकाशलाई काट्छन्। यसको स्थापना पछि यो सधैं भएको छ सबैभन्दा प्रतिष्ठित एयरलाइन्सको शीर्ष १० मा, राम्रो विमान र यात्रीहरूको संख्याको साथ। सबै एयरलाइन्सहरू संसारमा सब भन्दा लामो व्यावसायिक मार्गहरू सञ्चालन गर्छन् र एमिरेट्स उनीहरूमध्ये एक होईन।
तिनीहरूका जहाजहरू ब्राण्डका हुन् बोइंग र एयरबसयद्यपि यो ज्यादातर बोइंग 777 380 हो। विशाल एयरबस ए 853० लोकप्रिय डबल डेकर प्लेन वा सम्पूर्ण धुनमा डबल डेक हो (डबल डेकर बोइingको अगाडि मात्र दुई डेक हुन्छ)। यसले XNUMX XNUMX यात्रुहरू बोक्न सक्छ र त्यसैले यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्यिक विमान हो। एक छोटो समयको लागि यो दुबई - टोक्यो मार्ग कभर गर्ने विमान भएको छ, त्यसैले अर्को वर्ष मैले यो आनन्द लिनुपर्‍यो।
इमिरेट्सले तेलको शोषणबाट डलरको राम्रो प्रयोग गर्दछ, त्यसैले २०१ 2013 मा यो २०० वटा विमानहरूले सुसज्जित थियो। केहि बढी र केहि कम छैन। यसको प्रथम श्रेणीको फ्ल्याट र सेवाले यसलाई प्रस्ताव गर्दछ एयरोनटिकल क्षेत्रमा धेरै पुरस्कारहरू जितेको छ र हामी भन्न सक्छौं कि यो एक हो चार-स्टार एयरलाइन कोटी, कतार एयरलाइन्स पछि दोस्रो।
अमीरेट्स इकोनोमी क्लास
इकोनॉमी क्लास पनि भनिन्छ यो सबै विमानहरूको सब भन्दा जनसंख्या भएको वर्ग हो। एमिरेट्सले सँधै यसलाई एकदम आरामदायी वर्गको रूपमा प्रमोट गरेको छ र सेवा, ग्यास्ट्रोनोमिक र मनोरन्जनको साथ, अन्य एयरलाइन्समा उही कक्षालाई पछाडि पार गर्दै।
मेरो पहिलो अमीरात यात्रामा म यो पत्ता लगाउन उत्सुक थिए। सत्य यो हो कि बोर्ड मा सेवा को गुणवत्ता सुखद आश्चर्य थियो। पहिलो सीट छनौट गर्न सकिन्छ र टिकट खरिद हुने बित्तिकै आरक्षण गर्न सकिन्छ। यद्यपि आज केही वर्ष अघि यो सामान्य कुरा हो यो कुरा त्यस्तो थिएन।
कम्पनी द्वारा बढि सेवाहरु मध्ये एक हो Gran अर्थव्यवस्था वर्ग सीटहरु को पows्क्ति बीच ठाउँ र यो सत्य हो। एक ठूलो प्लस पोइन्ट। यदि तपाईं केहि बारम्बार यात्रु हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तुरून्त महसुस गर्नुहुनेछ कि किन एक अग्लो मान्छेले अधिक आरामसँग यात्रा गर्दछ। सबैभन्दा बढि प्रचारित वस्तुहरू मध्ये अर्को हो ICE वा inflight मनोरन्जन सेवा। उडान सुरु भएको छैन जब स्क्रिनहरू सक्रिय छन् र तिनीहरू प्रचारमा व्यस्त छन् फिल्म, रेडियो कार्यक्रम, वृत्तचित्र र संगीतको धेरै पूर्ण सूची त्यो यात्रीलाई उपलब्ध छ।
उदाहरण को लागी, अप्रिल २०१ 2014 मा म चलचित्रको आनन्द लिन सक्षम थिएँ कार्यक्रम (लान्स आर्मस्ट्रstrong साइकल दौडको बारेमा), एक चलचित्र जुन गत हप्ता मेरो भुक्तानी टिभी प्रणालीमा देखा पर्‍यो। र यस वर्ष मैले एनिमेमा देखेको थिएँ किमी नो वा, सुपर नयाँ। अमीरात यसरी थियो पहिलो एयरलाइन 2003 मा यो व्यक्तिगत मनोरन्जन प्रणाली समावेश गर्न र त्यसबेलादेखि उनले धेरै पुरस्कारहरू जितेका छन्।
यो मात्र मात्र क्वालिटी होइन किनभने उनका केही फिल्महरू प्रीमियर हुन् र ध्यान केन्द्रित गर्दैनन् हलिउड o युरोप तर तिनीहरूले प्रस्ताव मध्य पूर्व, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान र भारतका शीर्षकहरूउदाहरण को लागी। त्यहाँ डेढ सय भन्दा बढी चलचित्रहरू, करीव TV० टिभी च्यानलहरू, अधिक भिडियो च्यानलहरू, पचास भिडियो गेमहरू र बहु ​​अडियो च्यानलहरू छन्।
अर्कोतर्फ, उही प्रणालीले तपाईंलाई द्वारा लिईएका प्रत्यक्ष छविहरू हेर्न अनुमति दिन्छ क्यामेरा विमानको बाहिरी भागमा राखिएको थियो त्यसैले उडानमा त्यहाँ हेर्नको लागि कुनै रोचक कुरा छैन, टेक अफ र ल्यान्डि theirको आकर्षण छ। र यदि तपाईंसँग पैसा छ भने तपाईं सेवा पनि गर्न सक्नुहुनेछ इन्टर्नेट उच्च गति उडान मा एक उपग्रह को उपयोग गर्दछ।
र खानाको बारेमा के हुन्छ? हामीलाई थाहा छ कि हवाईजहाजमा खाना उत्तम होइन र हामी यसलाई कत्रो पनि सन्तुष्ट पार्न सक्छौं भन्न सक्छौं। एमिरेट्स को मामला मा, मात्रा र विविधता र ती तथ्यहरू जुन तिनीहरूले तपाईलाई डेलिभर गर्छन् धातु कटलरी र प्लास्टिक होइन। भाँडा स्वादिलो ​​हुन् तर सबैभन्दा उत्तम कुरा यो हो कि लामो उडानहरूको बारेमा होस्टिसहरूले रक्सी र स्नैक्सको साथ एउटा गाडी राख्छिन् जुन किन्चमा आउने यात्रुहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
अर्कोतर्फ, तपाईंलाई एक दिइन्छ कम्बल र हेडफोन। २०१ In मा उनीहरूले मलाई सानो पनि दिए मोजा, ​​टूथब्रश र टुथपेस्टको जोडीको साथ केस। मैले बाटोमा दुईवटा र फर्कने क्रममा दुईवटा घटनाहरू जम्मा गर्न सफल भएँ, तर यस वर्ष मैले यही यात्रा गरेपछि उनीहरूले त्यो खुशीको केस मलाई दिएनन्। मलाई लाग्छ कि उनीहरूले अब यो डेलिभर गर्दैनन्। अर्को परिवर्तन मैले याद गरे कि २०१ 2014 मा मैले सिट छान्नलाई एक पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो तर यस वर्ष उनीहरूले मलाई कर लगाए, करिब 50० डलर।
तपाईंलाई लाग्न सक्छ कि बुक गर्न यति तिर्न लायक छैन तर जब यात्रा hours० घण्टा भन्दा बढि तपाईं आफ्नो सीट छनौट गर्न चाहानुहुन्छ। बोइंग 30 777 को दुई पछाडि दुई सीटको पows्क्तिहरू छन् र ती बिना कुनै श doubt्काको उत्तम हुन्छ जब तपाईं यात्राको दिन भन्दा बढि आशा गर्नुहुन्छ।
अमीरात बिजनेस क्लास
मैले व्यापारमा यात्रा गर्ने भाग्य पाएको छु र मैले यसको लागि भुक्तान गरेको होइन तर अन्तिम समस्यामा मैले भोगेका समस्याहरूको शृ .्खलाको कारण हो। बिग्रिएको विमान, in in घण्टा रियो दि जेनेरियो, आईबेरियाद्वारा संचालित उडान र टोकियो - दुबई मार्गमा फिर्ता मार्गमा काम नगरेको आईसीई प्रणालीले मलाई यो उत्कृष्ट कक्षामा उफ्रने आश्वासन दियो। हामी सबै व्यापार उडान गर्नुपर्छ!
वर्षौंसम्म ईर्ष्या पछि ती केही व्यक्तिहरू जसले तपाईं भन्दा पहिले विमानमा प्रवेश गर्छन्, राम्रो लुगाहरू छन् र हल्का सामानहरू, म अन्ततः त्यस्तै गर्न सक्षम भएँ। र कस्तो लक्जरी! त्यो मात्र हैन तपाई पहिले विमानमा जानुहुन्छतपाईं अर्को ढोकाबाट हिंड्नुहुन्छ र तपाईं कहिले पनि अर्थव्यवस्था वर्गबाट ​​कोही देख्नुहुन्न। कम से कम प्रथम श्रेणी विमानहरु मा। तपाईं प्राइमरा मार्फत जानुहुन्छ, हो, व्यापारको जेठी बहिनी। एमिरेट्स यी दुई कक्षामा तैनात गर्दछ धेरै सुन लक्जरी, राम्रो अरबी शैली।
व्यवसाय मा सिटहरू अति सहज छन् र धेरै स्थानहरू छन्, पनि तिनीहरूले ओछ्यान बनाउँछन् सुत्नको लागि। तकिया उत्तम गुणस्तरको छ, अझ सुदृढ छ, र तिनीहरूले तपाईंलाई एक दिन्छन् बुल्गारी उत्पादनहरूका साथ बक्स भित्र: परफ्यूम, क्रीम, मिरर, टिश्यु, टूथब्रश, शेभि cream क्रीम, कंघी। तिनीहरूले तिमीलाई अभिवादन गर्छन् शैम्पेन को गिलासay हरेक खानु भन्दा पहिले तपाईंलाईaदिइन्छ menu। होस्टिसहरूले तपाईंको टेबल सेट अप गरे र यहाँ कुनै प्लास्टिक ट्रे वा एल्युमिनियम पन्नी ढक्कनहरू छैनन्: यो सबै क्रोकरी हो। तिनीहरूले पनि तपाईं प्रस्ताव तातो रोटी!
तिमीसंग ICE प्रयोग गर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्याब्लेट यो सीटको छेउमा तस्विर हुन्छ र हेडफोन राम्रो गुणको हुन्छ, क्लासिक टुरिस्टा प्लास्टिक होइन। र हो, यदि तपाईं आफ्नो सीटको लागि भुक्तानी गरेको अनुहार छ भने, होस्टेसहरूले तपाईंलाई उच्च तरिकामा सेवा गर्दछन्। मँ स्पष्ट पार्छु किनकि यो मेरो केस होइन। समाप्त गर्नका लागि, मसंग दुई diametrically विपरीत अनुभव थियो अमीरेट्स स्टाफको उपचार।
मेरो व्यक्तिगत राय त्यो हो यो एक महान कम्पनी हो जबकि सबै चीज आश्चर्य कार्य गर्दछ तर शायद एक समस्या अरु सबै हुन्छन्: groping, अहंकार, सबवे मा खाद्य टिकटहरु स्पष्ट उत्तर र समस्याहरु को एक स्ट्रिंग को सट्टा। एक ठूलो कम्पनी पनि ती पलहरुमा ठूलो हुनु पर्छ र यसको यात्रुहरुका प्रश्न वा उजूरीमा रिस उठाउनु हुँदैन। के तपाईं एमिरेट्स बाट यात्रा गर्नुभयो? तिम्रो बिचार के छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » उड्डयन » एमिरेट्स बाट यात्रा, एमिरेट्स
मेरो भिसा नम्बर के हो?